Kulanka Gudiga iskudhafka ee xasilinta dalka oo lagu soo gabagabeeyey Muqdisho – Radio Daljir
Kulanka Gudiga iskudhafka ee xasilinta dalka oo lagu soo gabagabeeyey Muqdisho
Mogadishu, May 08 -Kulanka Gudiga Wadajirka ah ee Xasilinta Dalka ayaa maanta kadhacay magaalada Muqdisho, waxaana ka qaybgalay Dowlada faderaalka KMG ah ee Soomaaliya, Puntland, Galmudug ,Ahlu-sunah waljameeca QM iyo ururka Midowga Afrika.
Kulanka oo qaatay saacado kooban ayaa waxaa xooga lagu saaray dagaalada ay ciidmada dowladda KMG ahi ay kula jiraan ururka Al-shabaab, waxaana laga soo saaray qodobo ay ugu muhiimsanayd in la mideeyo ciidamada dowladda ee qaybo ka mid ah gobolada dalka kula dagaalamaya Al-Shabaab islamarkaana ay hoosyimaadaan taliska guud ee ciidamada dowladda.
R/wasaaraha xukuumadda KMG Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali oo ka hor inta uusan shirku furmay khudbad u jeediyay madaxdii shirka kasoo qaybgalay , ayaa waxaa uu ku dheeraadaay ka hadalka guulaha ay dowladdu gaartay.
Waxaa uu sheegay magaalada Muqdisho inuu ka furmay shirka odayaasha dhaqanka beelaha ay kusoo xulanayaan xubnaha ansixinta dastuurka cusub ee Soomaaliya.
Dr Cabdiweli Maxamed Cali ayaa hoosta ka xariiqay ciidamada dowladdu inay sadexdii bilood ee ugu dambeeyey guulo gaareen, islamar ahaanaatana ay ururka Al-shabaab ka xoreeyeen meelo ka mid ah dalka Soomaaliya sida Galguduud, Jubada Hoose, Hiiraan iyo Bakool.
Waxaa sidoo kale r/wasaaraha uu tilmaamay, in mudnaan la siiyo sidii kooxha Al-Shabaab ee usoo hayaamay buuralayda Golis ee Puntland awoodooda loo wiiqi lahaa, si guud ahaan loo xasiliyo amaanka.
?Soomaaliya waxaa ay doonaysaa inay guul ka gaarto la galaanaka burcadbadeed iyo xagjirnimo islamarkaana ay ku bedelaan nabadgalyo iyo dimuqraadiyad.?ayuu yiri Dr Gaas.